Maxon နှင့် Red Giant တို့က Alien Invasion ကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာသင်ခန်းစာအသစ်ကိုတင်ဆက်ခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Maxon နှင့် Red Giant တို့က Alien Invasion ကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာသင်ခန်းစာအသစ်ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်
Friedrichsdorf, ဂျာမနီ - ဇူလိုင်လ 9, 2020 - ယနေ့ Maxon နှင့် အနီရောင်ဧရာ အပေါ်သင်ခန်းစာထုတ်ပြန်ခဲ့သည် တကျွန်းတနိုင်ငံသားကျူးကျော်ဖန်တီးမှုကိုဘယ်လို ဇူလိုင်လ၏ 4th စဉ်အတွင်း။ 1996 hit ရုပ်ရှင်အားဖြင့်မှုတ်သွင်း လွတ်လပ်ရေးနေ့Seth Worley သည်ကျူးကျော်မှုကိုပြန်လည်ပုံတူကူးယူရန်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရေဘဝဲနှင့်တူသောဂြိုလ်သားများသည်ရုပ်ရှင်မှပျံသန်းသည့်ဒိုင်နိုဆောများကိုအစားထိုးရွေးချယ်သည်။ Seth သည်ရုပ်ရှင်ရုံ၏ Supillains နှင့်ကိရိယာများကိုဖန်တီးရန် Cinema 4D ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် အနီရောင်iantရာပြည့်စုံ ထည့်သွင်းရန် လွတ်လပ်ရေးနေ့အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများ။ YouTube ၌ သင်ခန်းစာ Seth သည်မှန်ဘီလူးပုံပျက်ခြင်း၊ ကင်မရာကိုခြေရာခံခြင်း၊ 3D ကာတွန်း၊ အရောင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပိုမိုကြီးမားသောသက်ရောက်မှုများကိုဖန်တီးရန်များစွာတို့နှင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်ရမည်ကိုပြသသည်။
Seth သည်ဗီဒီယိုဖိုင်များကိုဖျက်သိမ်းခြင်းဖြင့်လေယာဉ်မှူးများပစ်ခတ်သောဒုံးကျည်များမှမီးတောင်ပေါက်ကွဲခြင်းအထိအရာအားလုံးပါ ၀ င်သောအရာများပါ ၀ င်သောအရာများပါ ၀ င်သောအရာများပါ ၀ င်သောအရာများပါ ၀ င်သည်။ Redcom ကုမ္ပဏီကြီး၊ Supercomp, Trapcode Tao နှင့် Optical Glow ကဲ့သို့သောကိရိယာများကို သုံး၍ မိနစ် ၄၀ အဆင့်ဆင့်သင်ခန်းစာသည် Magic Bullet Colorista IV နှင့်အရောင်ခွဲခြားခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်သောalienရာမဂြိုလ်သား Dinosaur ၏ကျူးကျော်မှုကိုအဆုံးသတ်ရန်နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်။
Maxon ရုပ်ရှင်ရုံ 4D: Cinema 4D သည်အကယ်ဒမီသိပ္ပံနည်းပညာဖြင့်ဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် 3D မော်ဒယ်လ်၊ ၎င်း၏အစွမ်းထက်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောကိရိယာသည်ဒီဇိုင်းပညာရှင်များအတွက် 3D လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
VFX မှန်ဘီလူးပုံပျက် Matcherဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မှန်ဘီလူးကနေရိုက်ကူးတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့အတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လွယ်ကူစေတဲ့ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ Lens Distortion Matcher သည်ကျယ်ပြန့်သောထောင့်၊ GoPro၊ ငါးမျက်လုံးစသည်ဖြင့်မသိသော်လည်း Lens Distortion Matcher ကချက်ချင်းသိရှိနိုင်သည်။
Trapcode Tao: built-in အလိုအလျောက်လမ်းကြောင်း, မျက်နှာဖုံးပုံစံများနှင့် 3D အလင်းများကနေရွေ့လျားမှုကိုအသုံးပြု။ ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်း 3D ဂျီသြမေတြီကိုထုတ်လုပ်ရန်ကိရိယာများဖြင့် Trapcode Tao သည်ရွေ့လျားဂရပ်ဖစ်စီမံကိန်းများအတွက်နက်ရှိုင်းမှုအသစ်ကိုပေးသည်။
VFX Optical Glow: After Effects နှင့် Premiere Pro တို့၏လျင်မြန်။ တောက်ပနေသောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသော၊ အလွန်အစစ်အမှန်အလင်းရောင်ရှိသောအလင်းရောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့် Optical Glow သည်ပရောဂျက်များသို့ရုပ်ပုံပြည့်စုံသောအလင်းရောင်သက်ရောက်မှုများကိုထည့်သွင်းစေသည်။
အနီရောင်ဧရာဠာ: GPU ကိုအရှိန်မြှင့်သောဗီဒီယိုသက်ရောက်မှုများနှင့်အသွင်ကူးပြောင်းမှုအဆိုကိုဂရပ်ဖစ်အနုပညာရှင်များနှင့်အယ်ဒီတာများအဘို့အ Plugins ရဲ့အနီရောင်ဧရာရဲ့စုဆောင်းခြင်း, ဠာရှစ်အိမ်ရှင်-applications များအနှံ့ထောက်ခံ 85 tools တွေကိုကျော်ပါတယ်။
တစ်လျှောက်လိုက်လိုပါသလား? နှစ် ဦး စလုံး၏အခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးကို Download လုပ်ပါ အနီရောင်iantရာပြည့်စုံ နှင့် Maxon ရုပ်ရှင်ရုံ 4D သူ၏လွတ်လပ်ရေးနေ့သင်ခန်းစာတွင် Seth အသုံးပြုသည့်ကိရိယာအားလုံး၏အပြည့်အ ၀ လည်ပတ်လုပ်ဆောင်နေသောဗားရှင်းများကိုရယူနိုင်ရန်!
တောင်းဆိုမှုaMaxon သို့မဟုတ် Red Giant မီဒီယာပြန်လည်သုံးသပ် Kit
မီဒီယာသမားများအနေဖြင့်မည်သည့်ကိရိယာများသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်အစုံနှင့်မဆိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ဖိတ်ကြားခံရသည် Maxon သို့မဟုတ် Red Giant ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ကိရိယာကိုတောင်းခံရန် Alexis Isaacs သို့ဆက်သွယ်ပါ [အီးမေးလျ protected].
Maxon ပရော်ဖက်ရှင်နယ် 3D မော်ဒယ်လ်၊ ပန်းချီကား၊ ကာတွန်းနှင့် rendering ဖြေရှင်းချက်များကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီလတွင် Maxon နှင့် အနီရောင်ဧရာ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုပေါင်းစည်းမှုကိုပိတ်လိုက်တယ်။ ပေါင်းစပ်ကုမ္ပဏီ၏ဆုရ ရုပ်ရှင်ရုံ 4D, Redshift 3D နှင့် အနီရောင်ဧရာ ထုတ်ကုန်များသည်ထိပ်တန်းအင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်များ၊ တီဗီရှိုးများနှင့်ကြော်ငြာများ၊ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသည့်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများမှ AAA ဂိမ်းများအတွက်ကစားနည်းများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသရုပ်ဖော်ပုံ၊ ဗိသုကာဒီဇိုင်းနှင့်စက်မှုဒီဇိုင်းများမှအရာအားလုံးကိုဖန်တီးရန်နှင့်ဆပ်ရန်ကူညီသည်။ Maxon ထုတ်ကုန်များကိုဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်၎င်း၏ကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ဖြူးသောကွန်ယက်မှတိုက်ရိုက်ရရှိနိုင်သည်။ Maxon ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Nemetschek အုပ်စု.
Maxon Web အရင်းအမြစ်များ
အပေါ်အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက် Maxon အောက်ပါအတိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်:
အနီရောင်ဧရာရုပ်ရှင်ရိုက်ကူး, အယ်ဒီတာများ, VFX အနုပညာရှင်နှင့်ရွေ့လျားမှုဒီဇိုင်နာများများအတွက်ထူးခြားသော tools တွေကိုဖန်တီးရန်ပူးပေါင်းသူကိုပါရမီအနုပညာရှင်နှင့်နည်းပညာသမား၏ဖွင့်လုပ်မယ့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီယဉ်ကျေးမှုအလုပ်နှင့်ဘဝအကြားချိန်ခွင်လျှာရှာဖွေတာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်တာဖြစ်ပါတယ် - ကြှနျုပျတို့သညျ "နှစ်ဆအောက်ဆုံးလိုင်းက" မခေါ် - ဤအတွေးအခေါ်ကုမ္ပဏီကြီးရလဒ်များကိုသီးကိုသီးသောရိုးရှင်းသော tools များတည်ဆောက်ခြင်း၏မျက်နှာသာအတွက်ရှုပ်ထွေးလျစ်လျူရှုကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း, (ကို Magic Bullet, Trapcode, ဠာနှင့် PluralEyes လိုမျိုး) ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ရုပ်ရှင်ထဲတွင်စံဖြစ်လာနဲ့ post-ထုတ်လုပ်မှုထုတ်လွှင့်ကြသည်။ 250,000 အသုံးပြုသူများကိုကျော်နှင့်အတူပြုလုပ်အသုံးပြုမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ software ကိုမြင်နေခြင်းမရှိဘဲတီဗီ၏ 20 မိနစ်စောင့်ကြည့်ဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်ပါပဲ။ အနုပညာရှင်များနှင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သောကြောင့်အတွေ့အကြုံများကနေကျနော်တို့အနုပညာရှင်တွေများအတွက် tools များရှိသောလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်ကောင်းစွာဖို့မသာပုံစံမျိုးရယူ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင် Watch 200 အခမဲ့လဲ tutorial ကျော်ထံမှလေ့လာသင်ယူ, ဒါမှမဟုတ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ software ကိုကြိုးစားပြီး www.redgiant.com.
MAXON အနီရောင်ဧရာ သင်ခန်းစာ VFX 2020-07-09
ယခင်: RUSHWORKS သည်လူနေအိမ်ပတ် ၀ န်းကျင်ကရိယာပစ္စည်းကိရိယာကိုထုတ်ပေးသည်
နောက်တစ်ခု: Blackmagic ဒီဇိုင်းသည် ATEM အဆင့်မြင့် panel အသစ်များကိုကြေငြာခဲ့သည်